Waxyaabaha Raggu Jecelyihiin Inay Ka Maqlaan Haweenkooda - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Waxyaabaha Raggu Jecelyihiin Inay Ka Maqlaan Haweenkooda
Shabakadda arimaha bulshada iyo jacaylka ee Aayaha, ayaa waxa ay idiin soo gudbineysaa 4 waxyaabood oo raggu ay jeclaan lahaayeen inay ka maqlaan haweenkooda ama xaasaskooda.
Dhammaanteen cillado waan leenahay, waxaa nahay bini aadam. Marka haweeney ay si cad u ogtahay cillada lamaaneheeda isla markaana wali ay ku qaadato cilladaas shuruud la’aan dabadeed jacaylka ayaa nuuraya oo si ubaxa u baxaya. Inaad lamaanahaaga cilladiisa ku qaadatid waa muhiim.
Marka nin uu si wanaagsan ula dhaqmo xaaskiisa isla markaana uu ixtiraamo fikradeheeda oo uu qiimo kadib waxaa wanaagsan in haweeneyda ay si wanaagsan u xoojiso dhaqanka wanaagsan ee ninkeeda uu leeyahay iydoo tuseysa inay ogtahay dadaalkiisa iyo wanaagga uu leeyahay isla markaana ku qiimeyneysa.
In haweeneyda ay seygeeda ku amaanto kartidiisa iyo guulaha uu hiigsanayo waa wax wanaagsan.
Ku amaanidda, ganacsiga, muuqaalkiisa iyo dabeecaddiisa wanaagsan waa waddo aad ku dhiseyso in jacayl xad dhaaf uu kuu sii qaado seygaaga sidaa darteed haka daalin inaad ku amaanto kartida uu leeyahay ninkaaga.
In ninkaaga aad tusto inuu yahay saaxiibka kuugu wanaagsan, jacaylkaaga iyo iftiinka noloshaada waa wax aad u qurux badan oo la jecleysto.
Inaad hadal ahaan ugu sheegto ereyadaas waxay keeneysaa inuu ogaado isla markaana garto qiimaha iyo micnaha uu kuugu fadhiyo.
Sariirta culeyskeeda ayay leedahay. Ninka wuxuu u baahanyahay ogaanshaha in ciyaartiisa sariirta aad farta ugu fiiqdo oo aad u sheegto inuu shaqo wanaagsan qabtay.
Haka tagin isagoo fekeraya oo la yaaban haddii kulanka sariirta uu waajibaadkiisa si wanaagsan u gutay iyo haddii kale, fadlan u sheeg inuu si qurux badan oo aad la dhacday uga soo baxay waajibaadkiisa.
5 love tips for a lasting relationship